Ejipta: Bilaogera nohazonina noho ny fanehoam-piraisankina! (Efa navotsotra ry zareo!) · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Bilaogera nohazonina noho ny fanehoam-piraisankina! (Efa navotsotra ry zareo!)
Voadika ny 21 Janoary 2019 5:06 GMT
Vaovao farany (16 Jan, 1hariva ora ao Kairo): Nahazo baiko famotsorana efa elaela ireo mpikatroka nosamborina tao Naga Hammadi, saingy mbola tsy fantatra hoe aiza/ary ahoana no hamotsorana azy ireo avy any Qena na halefa any Kairo.
-Vaovao farany (16 Jan, 2:50 hariva Ora ao Kairo): Navotsotra avokoa ireo tovovavy voasambotra ary miaraka amin'ireo mpisolovava amin'izao fotoana izao, ho any Cairo amin'ny alalan'ny micro-bus/fiarabe izy rehetra.
-Vaovao farany (16 Jan, 3:20 hariva Ora ao Kairo): Ao anaty kamiao ireo tovovavy ankehitriny ary miandry ireo ankizilahy ho avotsotra. Hiara-hiverina any Cairo ry zareo.
-Vaovao farany (16 Jan, 4:00 hariva ora ao Kairo): lasa ny fiara fitaterana madinika voalohany, miaraka amin'ny tovovavy 8 sy ankizilahy 3. ary aorian'izy ireo ny fiaran'ny polisy. Mbola miandry ny dingana manaraka ao amin'ny fitantanana ny vondrona sisa ary manomboka mandeha rehefa vita ny azy ireo.
-Vaovao farany (16 Jan, 6:00 hariva Ora ao Kairo): eny an-dalana hiverina any Kairo ny vondrona rehetra. Nozaraina hiditra anaty fiarabe 3 izy ireo. Antenaina ho tonga any Kairo aorian'ny misasakalina
-Vaovao farany (17 Jan, 2:30 maraina Ora ao Cairo): tonga soa aman-tsara tany Kairo ny vondrona iray manontolo. Tafaverina soa aman-tsara any an-trano izy ireo.
Ny marainan'ny zoma 15 janoary 2010, vondrona bilaogera Ejiptiana sy mpikatroka ara-politika no nankany Naga Hammadi (faritanin'i Qena, atsimon'i Ejipta) mba hanolotra ny fiaraha-miorin'izy ireo ho an'ny fianakavian'ireo niharam-boina tamin'ny fifandonana ara-pivavahana teo amin'ny Miozolomana sy ny kristiana nitranga herinandro talohan'izany, ka kristiana fito no maty voatifitra ny alina talohan'ny Krismasin'izy ireo tamin'ny 7 janoary, sy mba hanohitra ny sektarisma ara-pivavahana.
Rehefa tonga tao amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby tao Naga Hammadi izy ireo, dia nosamborin'ny polisy ny folo tamin'izy ireo, nalaina tany amin'izy ireo ny finday sy ny kara-panondro. Nentina tany amin'ny Sampan-draharaham-piarovana izy ireo, ary nohidiana tao amin'ny efitrano ary nolazaina fa halefa any amin'ny Fiarovam-pirenen'i Cairo.
Ireto avy ireo vondrona bilaogera nosamborina:
Mpisolovava maromaro no nifindra tany Naga Hammadi, niala tao amin'ny Foiben'ny Lalàna Hisham Mubarak (HMLC) mba hitaky amin'ny manampahefana hamotsotra ireo vondrona nosamborina tao Qena, ary hisoroka ny fandroahana any Kairo. Araka ny filazan'ny HMLC, manizingizina handroaka ny vondrona voasambotra any Cairo ny manampahefana, izay raha hitranga dia hahatonga ny vondrona hiatrika olana marobe rehefa eny an-dalana ho any Kairo, ary hampitombo ny mety hisian'ny endrika fanorisorenana isan-karazany.
Tsara homarihina fa nisy fitsidihana ofisialy nataon'ny Antoko Nasionaly Demokratika, antokon'ny fitondrana any Ejipta ny marainan'io andro io izay nahatonga ny olana teo amin'ireo mpisolovava sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Ejiptiana hanampy ireo vondrona voasambotra sy hanome fanohanana ara-pitsarana, noho ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana marobe teny an-toerana sy ny hampidrikina ny manampahefana tsy hamotsotra ireo voasambotra.
Hatramin'izao, tsy fantatra hoe rahoviana ny fotoana handroahan'ny manampahefana ny vondrona voasambotra any Kairo.